'Imfutshane yokuYinqoba' Jongana nomdlalo weCokie
by UCarrie Grosvenor
Ingxenye Eyona Miphumo Enhle? Uza Kudla i Cookie
Hlola ulawulo lwakho lwesisu sakho somzimba ngalolu dlalo olulula "iMinute to Win It". Unokuyidlala le ndawo malunga naphi na, nawaphi na iqela kunye nawaphi na ubudala / isakhono sezinga. Umdlalo weqela eligqibeleleyo kuzo zonke izihlandlo.
Hambisa enye i-cookie ezintathu ebunzini lakho emlonyeni wakho ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho.
I-minute-minute okanye isitophuwashi
Jongana neCokie ilula kakhulu - ubuncinane kwi-theory.
Hlala esihlalweni ngesitya see-cookie ze-Oreo ecaleni kwakho. Gcina intloko yakho emva kwaye ubeke ikhukhi phakathi kwembombo yakho. Xa iqela elingu-1 liqala, sebenzisa ubuso bakho kuphela ukuhambisa icookie ebunzini lakho emlonyeni wakho.
Lo mdlalo unokudlala kwiinqanaba zokuqala ze-"Minute to Win It" kunye necookie enye yexabiso elincinci le dollar kwimali. Kamva emdlalweni, izibonda ziphakanyiswa, kwaye abaphambili kufuneka baqhube ngempumelelo ii cookies ezintathu ebunzini emlonyeni. Unokwenza okufanayo ukuba udlala lo mdlalo weqela - vumela abantwana abancinci badlale ngombuso we-cookie, kwaye abantu abadala kufuneka badlale abathathu.
Ikhukhi mazibekwe phakathi kwebunzi lakho kwaye ungachukumisi amaqoma akho.
Unokwenza intloko yakho kwaye uhambise ubuso bakho, kodwa awukwazi ukuchukumisa icookie ngezandla zakho.
Icookie kufuneka ihlale iqhagamshelana nobuso bakho, ngoko awukwazi ukuzama ukuyiphosa ebunzini lakho kwaye uyibambe emlonyeni wakho.
Ukuba i-cookie iyawa ngaphambi kokufikelela emlonyeni wakho, kufuneka uqale nge cookie entsha.
Icookie kufuneka imele emlonyeni wakho, igcinwe ngokukhuselekileyo ngomlomo wakho kunye / okanye amazinyo, ukuba ubale. (Awunanto yokuyidla.) Ukuba udlala nge-cookie ezintathu rule, xa isendaweni, qinisekisa ukuba wonke umntu uyazi le nto aze ayiphonye kwaye aqale ngomnye olandelayo. ngenxa ... ikhukhi.)
Iingcebiso kunye neengcebiso
Gxinisa intloko yakho kwindlela eyahlukileyo ukusuka kwindlela ofuna ukuba icookie ihambe ngayo ukubonelela ukuzinza.
Sebenzisa izihlandlo eziphindaphindiweyo kunye nezihlunu zobuso bakho ngokukhawuleza kodwa ngokukhawuleza uhambise ikhukhi.
Xa ufumana i-cookie esondele emlonyeni wakho, ngokukhawuleza uyigubungele intloko yakho ukuze ifike kwindawo yayo yokugqibela.
Iholide Jongana neCokie
Oku mhlawumbi umdlalo olula kwi-show ukujika kwi-party party party themed. Sebenzisa ii-cookies ze-gingerbread zeKrismesi , i- Halloween- ekhethiweyo kunye ne-cookie i-cookie ehlotshisiwe yeso sihlandlo, ii-cookies kunye ne-frosting kunye nefafaza yokuzalwa kwemihla - unokunyuka nantoni na nale.
'Ubudade' - I-Women's Cast of TLC Show Show
I-Richest Late Night Talk Show Hosts
I-Top Reality Shows About Fashion Makeovers
Indlela yokufumana iiTikiti kwi-'Ellen DeGeneres Bonisa '
I-Top 10 i-Richest Talk Show Hosts Yonke ixesha
Unokufumana njani iiTikiti kwi-"View" eNew York
Mark Labbett, aka 'Isilo' kwi 'Chase'
Top 5 Intandokazi uJimmy Kimmel Sketches
Udliwano-ndlebe noKathy Leclerc (uDaphne, 'Utshintshiwe ngoNzala')
Imfutshane yokuYinqoba iMidlalo yeBhola
I-Fly Fishing Best kwiWestern United States
IiDassasaurs kunye nezilwanyana zasePrimeya zase-Arizona
NgoNcedo lweNtombi kaMariya
Vula amaMic Mic e Seattle
Indlela yokuba iProferfer
Ukwahlukana phakathi kobuchule kunye nezibalo
I-East Texas Baptist University Admissions
USeptember Worksheet kunye namaphepha ombala
I-Movement Women in Art
10 eziPhambili zeZikolo zoLwazi lweWrestling
Iidlo kunye 'neMpawu yeSondlo'
Indlela yokusebenzisa isichazi sesiFrentshi "Allons-y"
Indlela yokwenza ngcono ukuvuma
I-Greek Goddess Hecate
I-Koryo okanye iGoryeo uBukumkani baseKorea
I-Sonoma State University Admissions
Ukuphakama kweDorothy: iNkokheli yamaLungelo eNkcubeko
Iinqwelo ezi-3 ezibaluleke kakhulu zeCanoe zokufunda
Iindlela zePotassium-Argon zokuDana
I-World Smelest Chemicals
Ukuphononongwa kwe-Remake ye-Movie Skating Movie "Ice Castles"